weheliso filter nooca - Shiinaha Tianjin Chunyuan Longrun
filter nooca isu geynta
Bacrimin iyo nidaamka filter bacrimin iyo nidaamka filter yihiin qaybo ka mid ah habka waraabka faleebo, nidaamka bacriminta caawin kartaa badbaadin kharashka shaqada maxaa yeelay waxa ay u wada shaqayn karaan marka waraabka. nidaamka Filter caawin kara biyaha cad ka dhigi iyo macaanka, ma sameeyo marka waraabka. Tianjin Chunyuan Longrun Micro-waraabka CO Technical., LTD waxay bilaabeen in ay ka shaqeeyaan 1998, oo la aasaasay shirkadda ee 2000, taas oo ah shirkaddii ugu horreysay ee ku hawlan soo saarka ee nidaamka waraabka faleebo kaydsi oo biyo beeraha. Afte ...
Bacrimin iyo nidaamka filter
Bacrimin iyo nidaamka filter yihiin qaybo ka mid ah habka waraabka faleebo, nidaamka bacriminta caawin kartaa badbaadin kharashka shaqada maxaa yeelay waxa ay u wada shaqayn karaan marka waraabka. nidaamka Filter caawin kara biyaha cad ka dhigi iyo macaanka, ma sameeyo marka waraabka.
Tianjin Chunyuan Longrun Micro-waraabka CO Farsamada., LTD waxay bilaabeen in ay ka shaqeeyaan 1998, oo la aasaasay
shirkadda ee 2000, taas oo ah shirkaddii ugu horreysay ee ku hawlan soo saarka ee nidaamka waraabka faleebo, waayo,
badbaadinayo biyaha beeraha. Ka dib markii horumarinta about20 sano, waxaan leenahay saddex nidaamka hadda, habka waraabka faleebo, buufin nidaamka waraabinta iyo beerta system.The waraabka waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka mid yihiin beebka faleebo, iyo biibiilaha PE, tuubada PE, nidaamka filter, taangiga bacriminta, tuubbooyin. Dhamaan iyaga ka mid ah waxay leeyihiin mari ISO 9001 shahaado.
Ka hor inta iibsan midhihii in aad ogaato su'aalaha soo socda, waxaan qorshee doonaa habka waraabka faleebo sida macluumaadkaaga.
1. dhererka iyo balladhka dalka?
2. Waa maxay geedka ma waxaad u koraan?
3. Masaafada ee safka?
4. Isha biyo, ceelka ama webi ama dadka kale?
1.Why isticmaalaan nidaamka waraabka faleebo a?
Jawaab: habka waraabka faleebo waa nidaam taas oo ka dhigi kara inaad badbaadinta biyaha / shaqada / bacrimin ah.
nooca 2. Ganacasiyada alaabta waa i dooran waayo, dalkii?
Jawaab: Waxaa sida inta dalka ay tahay iyo maxaad rabtaa in la qorsheeyo, haddii aadan si fiican u og tahay,
kaliya i weydiin leh ma ka waaban, si waafaqsan macluumaadka i idin siin doonaa talo.
3.Does nidaamka this kici badan?
Jawaab: Waxaa ku xiran design ah, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan u idin siin design ah in kharash yar ku ool ah laakiin.
4. shahaado kasta?
Jawaab: caadiga ah: GB / T 17187-2009. ISO9001
5.How ku saabsan adeegga ka dib-iibka?
20years aragnimada baabi'iyo walwalkoodu ku saabsan labada tayada iyo rakibaadda.
Previous: filter culus
Next: filter disc
Beeraha faleebo Waraabka Filter
Duufaan Filter Water
faleebo Waraabka Filter
Filter Waayo Qiiq Factory
Filtarka Waayo Systems Biyaha
Waraabka Micro Filter
System Filter Biyaha Waraabka
Filter Sand Waayo faleebo Waraabka
Is Nadiifinta Filter
Filter Water habboona
Filter Water Rakibidda Lab xusulka
Filter Water dibadeed
filter culus oo mesh
biraha taangiga bacrimin 100L
taangiga bacrimin 2
63mm filter mesh